कसरी चिन्ने ब्रान्डेड लुगा? यस्ता छन् ४ तरिका – Dailny NpNews
कसरी चिन्ने ब्रान्डेड लुगा? यस्ता छन् ४ तरिका
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ समय: १८:५२:५५
काठमाडौंः आजभोलि हरेक कपडा व्यापारी आफ्नो सामान ब्राण्डेड भनेर बेच्न खोज्छन्। जानकारीका अभावमा ब्राण्डेड कपडा भनेर मानिसहरु ठगिने गर्छन्। ब्राण्डेड कपडाहरुको पहिचान कपाडाको ट्यागबाट गर्न सकिन्छ, तर आजभोलि अन्य नक्कली ब्राण्डहरु पनि सक्कली ब्राण्डको ट्याग लगाएर कपडा बेच्ने गर्छन्।
धेरै जसो सक्कली ब्राण्डहरु कपडाको भित्री भागमा आफ्नो ट्याग लगाउँछन् जसले कपडाको गुणस्तर जनाउँछ। कपडा किन्नु भन्दा पहिले कुन ठाउँबाट किन्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि ध्यान गर्नु पर्छ। किनभने धेरै जसो ब्राण्डेड कम्पनीहरु आफ्नो आधिकारिक स्टोरहरुबाट मात्र कपडा बेच्ने गर्छन्।
कपाडा लिनु पूर्व कपडालाई लगाएर हेर्ने। अन्य ब्राण्ड भन्दा ब्राण्डेड कपडाको फिटिङ राम्रो हुन्छ। नक्कली ब्राण्डका कपडा सक्कली ब्राण्ड भन्दा कडा र रफ हुन्छन् भने सक्कली कपडाहरु फ्रेस र कोमल हुन्छन्। ब्राण्डेड कपडामा धेरै छुट हुँदैन। यदि कुनै ठाउँमा ब्राण्डेड कपडामा धेरै नै छुट दिइएको छ भेने सो कपडा नक्कली ब्राण्डको हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।
ब्राण्डेड कपडाको भित्री भाग निकै राम्रो गुणस्तरको हुन्छ। जस्तै कोटको भित्री कपडा, जिन्स प्यान्टको खल्तीको कपडा राम्रो गुणस्तरको हुन्छ र सिलाई पनि मजबुत र राम्रो हुन्छ। ब्राण्डेड कपडामा बटन, जिपर आदी राम्रो गुणस्तरको लगाइएको हुन्छ। ब्राण्डेड कपडामा सिलाई सिधा हुन्छ, सबै कपडामा सिलाई बराबर र एकनाशको हुन्छ।
यदि कपडा मोटो छ भने डबल सिलाई गरिएको हुन्छ र धागोको रङ्गमा पनि ध्यान दिइएको हुन्छ। ब्रान्डेड कपडा अलिकति महँगो भए पनि गुणस्तरीय हुन्छन्। बजारमा ब्रान्डका नाममा बेचिने लुगा नक्कली (कपी) पनि हुन सक्छन्। ब्राण्डेड कपडा यसरी चिन्न सकिन्छः
–स्टिचिङमा ध्यान दिएर ब्राण्डेड कपडा चिन्न सकिन्छ। ब्रान्डेड कपडाको स्टिचिङ सीधा, सफा र समान हुन्छ। स्टिचिङमा धागो पनि एकनासे प्रयोग गरिएको हुन्छ। –ब्रान्डेड कपडाको जिप वा चेन पनि राम्रो गुणस्तरको हुन्छ। ब्रान्डेड कपडाको पहिचान गर्न लुगामा रहेको चेन खोल्ने र बन्द गर्ने गर्नुपर्छ।
यसो गरेर कपडा ब्रान्डेड भएको अथवा कपी भएको थाहा पाउन सकिन्छ। धेरैजसो ब्रान्डेड कपडाको चेनमा ब्रान्डको नाम लेखिएको हुन्छ।–बटनबाट पनि पहिरन ब्रान्डेड या कपी भएको थाहा पाउन सकिन्छ। बटनमुनि रहेको पेचमा ब्रान्डको नाम लेखिएको छ भने त्यो सक्कली हो। ब्रान्डेड कपडामा ब्रान्डको नाम लेखिएको हुन्छ भने कपी कपडामा साधारण बटन हुन्छ। –लोगोबाट पनि ब्रान्डेड कपडाको पहिचान गर्न सकिन्छ।